Ny Fomba Hifehezan’ireo Vazimba Teratany Indray Ny Fahitàn’ny Hafa Azy Ireo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2016 3:05 GMT
Pikantsary avy amin'ny lahatsary notontosain'ny fanentanana “Ho an'ny fitaovam-pifandraisana antsika tanteraka”. Hita ao amin'ny Vimeo
[Mitondra ho amin'ny fiteny Espaniola daholo ny rohy ato anaty lahatsoratra]
Teraka noho ny sary ratsy omena ireo vahoaka sy vondrom-piarahamonina vazimba teratany izay matetika aelin'ireo media mahazatra ny fanentanana ho fanabeazana sy fampahatsiarovantena Komunikatuz Eraldatu, los pueblos dueños de su comunicación [Komunikatuz Eraldatu, maka ny fitaovam-pifandraisana ho azy ireo ny vahoaka].
Araka ny lazain'ny fikambanana Mugarik Gabe, izay nanomboka ilay fanentanana :
Miaraka amin'ilay fanentanana vaovao ataonay, tianay haseho fa namorona fitaovam-pifandraisana hiarovana ny zon'izy ireo, hanamafisany ny teniny sy hitahirizany ny maha-izy azy ireo vahoaka vazimba teratany ao Amerika Latina.
Ny tanjona dia ny hitambarana manodidina ilay asa izay nanolotra sy manolotra hatrany ireo mpandray anjara amin'ny sehatry ny fifandraisana azo atao fanolo ary ireo fitaovam-pifandraisana an'ny Euskal Herria, izay mitovy tanjona tratrarina.
Omanin'ilay fanentanana ihany koa ireo andianà andro atokana ho an'ny vahoaka vazimba teratany, ho an'ny mediam-bahoaka ary ny fifandraisana, ny hanaitra fiovàna sosialy mandritry ny volana May amin'ity taona ity. Hisy ny kabary, ny fifanakalozankevitra ary fijerena lahatsary fanadihadiana, ka handray anjara amin'izany ireo mpanao gazety sy mpampita vaovao avy amin'ny Euskal Herria, avy any Bolivia, Meksika ary Arzantina.
Mba hahafantaranao bebe kokoa, jereo ny bokikely fampahafantarana ny fanentanana. Azo arahana ao amin'ny kaonty Facebook sy Twitter -n'ny Mugarik Gabe ireo torohay nivoaka farany indrindra.
Lasa mpisehatra ny tantaranay manokana izahay, vahoaka vazimba teratany, tamin'ny famoronana ny fitaovam-pifandraisana anay manokana, mandrafitra ny kabarinay manokana, mivoaka amin'ny fanadinoana, mankalaza ny fiainana sy ny tontolo, mba ho ny fanantenana no handresy, na eo aza ny tsy rariny.